Oromiyaa Keessatti Malaamaltumman Kan Shakkaman To'annaa Jala Oolan
Bitootessa 17, 2011
Torban tokko caalaaf gaggeefamaa kan ture walgahiin Dh.D.U.O (OPDO) aangawoota sadarkaa gadii qabee hanga sadarkaa olaanaa 120 caalaa dhimma malaa maltummaan qoratee jira.Yeroo ammaa to’annaa jala kan jiran aangawonni kun aangoo isaanii irraa kaafamanii murtii duratti akka dhiyaatan murteffamuu isaa, walgahii kana irratti kan hirmaatanii fi ibsa kennuuf aangoo hin qabnu kan jedhan miseensonni OPDO ibsaniiru.
Gama kaaniin mummichi ministeera Itiyoophiya mallas Zenaawwii tuuta oduuf ibsa kennaniin, lafa uummataa abbootii qabeenyaa fi namoota dhunfaaf kan kennan bu’aa ofii eegsisuuf jecha kan saaman heddummaachaa akka jiran beekna jedhanii turan.
Komishiina naamusaa fi farra malaa maltummaa oromiyaatti abba adeemsa hojii dhimmootii komunikeeshinii kan ta’an Obbo xayyib Abba Foggi kan hidhaman 120 hin ga’an aangawoota sadarkaa olaanaa orommiyaas miti jedhan.
Malaa maltummaa lafaa wajjin wal qabateen baatii lama dura magaalaa sabbataa keessatti lafa seeraan ala gurgurachuu, namaaf dabarsanii kennu,ofii itti fayyadamuu iaalchisee namonni 30 ta’an ji’a tokkoo ol to’annaa jala oolanii mana murtitti dhiyyefaman jedhu.Baatilee 6 duras namonni haala wal fakkaataan hidhaman 67 adabi hidhaa waggaa tokkoo kaasee hanga waggaa 10 ga’u irratti muramuu obbo xayyib ibsanii jiran.
Abba dhimmaa keessumeessuu dhabuu matta’aa ykn gunaa fudhachu yeroo baayyee deddebisuu fi kanneen biroon ka jiru ta’uu ibsan obbo xayyiib. MP3 tuquun dhaggefadhaa